राष्ट्रहितमा समर्पित पत्रकारका कलमहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
राष्ट्रहितमा समर्पित पत्रकारका कलमहरु
२०७१ जेष्ठ ८, बिहीबार ०२:०० गते
सिक्नैपर्ने गुणहरु, समाजलाई अत्यावश्यक पर्ने गुण र विशेषताहरु थुप्रै मानिसहरुमा हुन सक्छन् । फरक यहीँनेर हुन्छ कि कसैको गुण र विशेषता बाहिर देखिन्छ, कसैको देखिँदैन । भन्नैपर्ने विषय के पनि छ भने कसैले राष्ट्र र जनताका लागि काम लाग्ने खुबी र विशेषताहरु प्रस्तुत गर्न सक्छन्, मौका पाउन सक्छन् र कसैले सक्दैनन्, फरक यहाँनेर पनि छ । लामो समय बेलायत बसेर बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरे, लेखेर र बोलेर । उनले आफूमा अन्तरनिहित खुबी प्रदर्शनका लागि कतिसम्म पापड बेले होलान्, त्यो उनैलाई नसोधी थाहा हुने विषय होइन । तर, यतिचाहिँ पक्का अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनको प्राणीहितका पक्षमा उजागर भएका अभिव्यक्तिहरु दुनियाँका माझमा प्रस्तुत गर्न उनले अनगिन्ती हन्डर र ठक्कर खाएकै हुनुपर्छ ।
अर्का एक जना पत्रकार छन्– देवप्रकाश त्रिपाठी । सहकर्मी साथीहरुको भनाइअनुसार उनी धादिङ जिल्लामा जन्मिएका हुन् । संघर्ष गर्दै आज आफ्नो विवेक र विचार प्रवाहद्वारा विकृति र कुसंगतिमाथि दह्रो प्रहार गरिरहेका छन् भने राष्ट्रहितमा समर्पितहरुलाई आफ्नो कलममार्फत हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । रवीन्द्र मिश्र र देवप्रकाश त्रिपाठीले के त्यस्तो काम गरे, जुन राष्ट्र र जनताका लागि लाभदायी यो कलमले ठह¥यायो ? पहिले थप चर्चा गरौँ, रवीन्द्र मिश्रको लेखाइ र बोलाइले कति नेपाली जनतालाई राहत मिल्यो, त्यसपछि चर्चा हुने छ देवप्रकाश त्रिपाठीको ।
रवीन्द्र मिश्रले लन्डनमा बसेर बीबीसी नेपाली सेवाको समाचार शाखामा रहेर काम गरे । सकारात्मक प्रतिफल निकाल्न विभिन्न विषयको रिपोर्टिङ गरे । कुशल अन्तर्वार्ताकारका रुपमा ख्याति कमाए । उनले नेपालमा बहुदल आउनुपूर्व घुमाउरो पाराले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लबिङ गरे । अन्तर्वार्ताका लागि उनले पञ्चायती शासनका मतियारहरुलाई सोधेका प्रत्येक प्रश्नले बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गरेको सहजै बुझिन्थ्यो । निर्दलीय र एकदलीय वा अधिनायकवादी जोसुकै होस्, रवीन्द्रले प्रश्नै सोधेर खासखास जनविरोधी त¤वहरुलाई पानीपानी पारे । मैं हुँ भन्ने नेता आच्छु–आच्छु भए । उनीसँग अन्तर्वार्ताको टेबुलमा बस्न पनि डराए । जति पनि व्यक्तिसँग रवीन्द्रले अन्तर्वार्ता लिए, सोधिएका सबै प्रश्नहरुले नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणलाई सम्बोधन गरेको थियो । यतिबेला पनि प्रत्येक नेपाली त्यो गोरो छाला भएका मानिसहरुको देश बेलायत जान चाहन्छन् । गोरो छाला भएका त्यो देशका मानिसलाई कमजोर चिन्तनका नेपालीहरुले पहिलो दर्जाको मानव ठानेर आफूलाई सानो र तुच्छ ठान्छन् । जसरी पनि त्यही बेलायत जान चाहन्छन् र त्यहाँको भौतिक सुख भोग गर्न चाहन्छन् ।
जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, यो प्रसंग यहाँ किन उठाइयो ? कारण यो हो– रवीन्द्र मिश्र लामो समय बेलायतमा रहेर पनि उनको मन र मस्तिष्क जहिलेसुकै नेपाली जनताको हितमै रह्यो । उनले चाहेको भए जीवनभरि त्यही पौन्ड स्टर्लिङवाला, अग्ला र गोरा छाला भएका मानिसले राज गरेको ठाउँ जुन ठाउँ दरिद्री चिन्तनका नेपाली खासगरी युवा जमातलाई स्वर्ग हो, त्यही देशमा बस्न सक्थे । उनले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहीँको सुखसुविधा दिलाउन सक्थे, तर उनले त्यसो गरेनन् । देशको माया गरे र छोराछोरीलाई पनि मुलुकलाई माया गर्न सिकाए । सपरिवार उनी नेपाल आए । मिश्र कति राष्ट्रलाई प्रेम गर्छन्, यहाँका मानिसको दुःख–पीडा हटाउन उनी कति क्रियाशील छन् भन्ने कुरा उनका लेखहरुबाट प्रस्ट हुन्छ ।
केही समयअघि उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा खुल्लापत्र लेखेका थिए । त्यस पत्रमा उनले राजालाई एक पटक मर्न पर्ने छ । नासिने शरीर लिएर आएको हुनाले तपाईंसँग भएको अकुत सम्पत्ति नेपाली जनताको हितमा लगाउनुस्, बागमती सफा गर्नुस्, ठाउँठाउँमा स्कुल र अस्पताल बनाउनुस्, तपाईंको कल्याण हुन्छ । साथमा, भोका नेपाली पेटहरु अघाउने छन्, शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चितहरुको जीवन सार्थक हुने छ भनी अनुरोध गरेका थिए । यो एउटा नेपाली पवित्र मन थियो रवीन्द्रको । राजा ज्ञानेन्द्रको मन पलाएर उनले उनको धन पुण्यकर्ममा लगाउँछन् वा लगाउँदैनन्, त्यो भविष्यले बताउला । तर, एक नेपाली नागरिक भएर कमजोर नेपालीको हितमा हुनेखानेका धन प्रयोग होस्को कामना गर्नु भनेको उत्कृष्ट र उपल्लो स्तरको मानवता प्रदर्शन गरिएको अवस्था हो । यसको खुल्ला दिलले प्रशंसा गर्नुपर्छ ।
रवीन्द्रका हरेक लेखले नेपाली कमजोर महिलाहरुको हितमा बोलेको छ । हित चिताएको छ । जति एक नेपाली नागरिकले, एक सञ्चारकर्मीले गर्न सकिन्छ, रवीन्द्रले गरेका छन् । उनले नेपाल र नेपाली जनतालाई कहिल्यै बिर्सन नसक्ने गुन लाएका छन् । रवीन्द्रले केही समयअघि मात्र काठमाडौँबाट प्रकाशन हुने एक दैनिक पत्रिकामा आफ्नो निजी विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा मृत्यु कुरेर बसिरहेका एक राष्ट्रप्रेमी, नेपाली जनताप्रेमी, क्यान्सर रोगी युवा अच्यूत शर्माले आफूले कमाएको पैँतीस लाख रूपैयाँ क्यान्सर रोगीकै उपचारमा सहयोग होस्को चाहना राखेर ट्रस्टमा राखिदिएको प्रसंग उल्लेख गरे । यो विषय उनले उल्लेख गर्नुको तात्पर्य उनले अन्य धनी–धनाढ्य, हुनेखाने र हँुदाखानेहरु सबैलाई धनको दुरूपयोग होइन, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । नैतिकवान र विवेकशील जोकोही नेपाली नागरिकलाई मृत्यु कुरेर बसेका अच्यूत भाइको कामले हृदय छुन्छ भने त्यो पुण्यकर्मको सकारात्मक व्याख्या, विश्लेषणसहित जनताको माझमा ल्याएर मानव कल्याणमा धन प्रयोग गर्न हौसला प्रदान गर्ने रवीन्द्रको कार्यको खुल्ला रुपले प्रशंसा गर्दछन् । सम्मान प्रकट गर्दै शिर निहुराउँछन् ।
अर्का पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको योगदान पनि यो मुलुकमा कम छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा उनले उठाएका छन्, संघीयताको । नजानीकन, नबुझीकन संघीयतामा जाँदा मुलुकको स्थिति जोखिममा फस्न सक्छ– उनले चेतावनी दिएका छन् । विदेशीको इशारामा काम गर्ने नेताहरुको जहिलेसुकै झाँको झारेका छन् । नेपाली नेताहरु ज्यादा सुविधाभोगी भएर जनताको दुःख र कष्टलाई बेवास्ता गरेको स्थितिलाई उनी आफू चिन्तित बन्दै जुनसुकै पार्टीका त्यस्ता धर्मछाडा अनैतिक नेतालाई उनले निरन्तर खबरदारी गरेका छन् । स्वदेशी पहिचान मेटाउने कामको उनले विरोध गरेका छन् । विदेशीको थिचोमिचोको कडा विरोध गरेका छन् भने उनले प्रत्येक बुधवार साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने घटना र विचार पत्रिकामार्फत जनआन्दोलन भाग–२ पछि अन्धाधुन्द पैसा खाएर र विदेशीको दबाबमा सातुको भाउमा बेचिएको तीस लाख नागरिकता पुनः छानबिन गर्नुपर्छ र सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिने र पैसाको प्रभावमा बाँडिएको नक्कली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । देवप्रकाशको योभन्दा ठूलो राष्ट्रभक्ति अरु के हुन सक्छ ? आज पैसा खाएर र विदेशीको दबाबमा परेर बाँडिएको नागरिकताको घातक परिणामस्वरुप भोलि स्वदेशमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाने र केही वर्षभित्रै मुलुकमा नेपालीचाहिँ अल्पमतमा पर्ने र विदेशी बहुमतमा पुगेर संसद्मा वैधानिकतासहित मुलुक विदेशीको हातमा जाने अवस्थाको त्रिपाठीले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
यसरी पत्रकारद्वय रवीन्द्र मिश्र र देवप्रकाश त्रिपाठीले दर्शाएका राष्ट्रप्रेमको भावनाबाट स्वदेश र विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरुले राष्ट्रप्रेम के हो, राष्ट्रियता के हो, मानवता के हो, नागरिक कर्तव्य के हो बुझ्न सक्छन् भने स्वयम् पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील तमाम सञ्चारकर्मी साथीहरुले समेत विदेशीको सामु झुक्न नहुने सन्देशसहित आफ्नो कर्तव्यपथमा लम्किन प्रोत्साहन पाउन सक्छन्, इमानदारिता प्रदर्शनसहित ।